Indlu entle embindini weArendal - I-Airbnb
Indlu entle embindini weArendal
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPål
Wamkelekile e-Arendal kunye nale ndlu ipholileyo kwaye izolile. Indlu yakhiwa ngo-1880 kwaye inamagumbi amathathu. Ibekwe kwimizuzu nje embalwa ukusuka kumbindi wedolophu apho uya kufumana izibuko, ulwandle, iikhefi kunye neeresityu, indawo yokuthenga kunye negrosari. Indawo efanelekileyo undwendwela i-Arendal emsebenzini okanye ukonwabela iintsuku ezithile kule ndawo intle.
Le ndlu inembonakalo entle yesixeko kwaye inegumbi lokuhlala elipholileyo nelitofotofo elinendawo yomlilo. Igumbi lokuhlambela elineshawa, umatshini wokuhlamba, i-ayini kunye ne-hairdryer, igumbi lokulala elinebhedi yokumkanikazi kunye nekhitshi elixhotyiswe kakuhle. Uya kufumana isithethi seBluetooth, ezinye iincwadi, ikofu kunye neti zikhona. Itafile yokutyela inokwandiswa ukuze ilingane abantu aba-6 ukuya kwabasi-8.
Ukuba ufuna indawo yokusebenzela, zombini umshicileli kunye nesitulo seofisi esilungileyo sinokufakwa. Inethiwekhi yefiber engenazingcingo enomthamo olungileyo.
Uyakwazi ukufaka oomatrasi bomoya ababini abatyebileyo ukuba ungaphezu kwabantu ababini.
Ukupaka kwigaraji yokupaka iimitha ezingama-80 ngaphantsi kwendlu. Ixabiso malunga. 150, - pr. imini nobusuku. Izikhululo zokutshaja ezikhoyo kwindawo yokupaka iimoto zombane.
Ibhedi enkulu eyi-1, oomatrasi abampontshwayo abayi- 2
Ibekwe kwimizuzu nje embalwa ukusuka kumbindi wedolophu apho uya kufumana izibuko, iikhefi kunye neendawo zokutyela, indawo yokuthenga kunye nevenkile. Ukuhamba imizuzu emi-2 ukuya kwisikhululo sebhasi, iHolo yeDolophu kunye nendawo yokuthenga, ukuhamba imizuzu emi-4 ukuya echwebeni. Iimephu kunye nolunye ulwazi luyafumaneka kwiflethi.
Ukuhlala kufutshane. Nikeza ngolwazi kunye nohambo lwephenyane lokujonga indawo kunye ne-waterport.